Madaxweynaha dalka oo loo soo jeediyay in uu musuqmaasuqa la dagaalamo – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha dalka oo loo soo jeediyay in uu musuqmaasuqa la dagaalamo
Star FM December 18, 2016
Qaar ka mid ah hogaamiyaasha xisbiga Jubilee ayaa sheegay in musuqmaasuqa uu dhaawac soo gaarsiyay sumcada xisbiga jubilee sidaas awgeedna madaxaweyanah dalka uhuru Kenyatta looga baahanyahay in uu si weyn ula dagaalamo wax isdaba marinta.
Xildhibaanka laga doortay degaanka Kigumo , Jamleck Kamau ayaa ka dhwajiyay in xisbiyada mucaradka ay si weyn hadal qabsi uga dhigteen fadeexada kala duwan si uunan madaxweynaha ugu guuleysanin doorshada soo socoto.
Xildhibaanka ayaa intaas ku daray in hadii maamulka jubilee uunan si gaar ah u eegin arrimaha musuqmaasuqa iyo sida looga taqalusi karo, ay adkaan karto in mar kale uu xisbigaasi dalka ka taliyo.
Waaxyaha kala duwan ayuu mr Kamau u soo jeediyay in ay qaadan tallabo wax ku ool ah oo lagula dagaalamayo fadeexadaha dalka wadanka saameeyay.
Sabina Chege oo ah wakiilka haweenka ee countiga Murang’a aya dhankeeda sheegtay in isbeheysiga mucaradka aynan doorashada soo socoto ku guuleeysaneyn maadama sida ay hadalka u dhigtay aynan tixgelinin danaha shacabka kenyaanka ah.
← Urur goboleedka ECOWAS oo tageero u muujiyay madaxweynaha dhawaan la doortay ee Gambia
Madaxweynaha Venazuela oo difaacay go’aankiisa uu ku joojyay isticmaalka lacagta dalkaasi →